रंगशालामा हेभीवेट दर्शक - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
बलात्कारविरुद्ध प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शन (फोटो फिचर)
यू-१७ एसिया कपः नेपाल पोट ३ मा
६३८ पालिकाको मतगणना सम्पन्न
चेल्सी लेस्टरसंग रोकियो
बैंगलोरको प्लेअफ सम्भावना कायम
डब्लूडब्लूएफ नेपालले मनायो २९ औं वार्षिकोत्सव
काठमाडौं र धरानमा चल्दा पोखरामा किन चलेन लौरो ?
राति सुत्दा भुलेर पनि नगर्नुस् यस्ता गल्ती
पीडित युवती भन्छिन्–बेहोस बनाएर बलात्कार गरे
नेपालद्वारा बंगलादेश २–१ ले पराजित
रंगशालामा हेभीवेट दर्शक
मेरो लाइफस्टाइल || 29 March, 2021
दशरथ रंगशालामा आज भएको थ्री नेशन्स फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपालले बंगलादेशलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
गत बर्ष आयोजना भएको साफ खेलकुद प्रतियोगितापछि कोरोना संत्रासले नेपालमा खेलकुद गतिविधि लगभग शुन्य जस्तै थियो । यसै विच नेपालमा आयोजना भएको थ्री नेशन्स फुटबल प्रतियोगिताले नेपाली खेलकुदको क्षेत्रलाई गति दिने संकेत देखाएको छ । यसपटक आयोजना भएको फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तानले सहभागिता गरेका थिए ।
आज भएको फाइनल खेल हेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रंगशाला पुगे ।
कोरोना महामारीका कारण थलिएको खेलकुद क्षेत्रलाई उठाउन थ्री नेशन्स फुटबल आयोजना गरिएको हो । प्रतियोगिता हेर्न रंगशालामा हजाराैं दर्शक पुगेका थिए भने टेलिभिजन, युट्युव र अन्य सामाजिक संजालमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नेहरूकाे संख्या पनि उत्तिकै थिए । यि थिए नेपाल र बंगलादेशबीचकाे म्याचमा दर्शक बन्न पुगेका भीआईपीहरु।
१. केपी शर्मा ओली (प्रधानमन्त्री)
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आजको फाइनल खेल हेर्न दशरथ रंगशाला पुगेका थिए । खेलको पहिलो हाफको १८ औँ मिनेटमा नेपालको तर्फबाट संजोग राईले गोल गरेका थिए । उनको यो डेब्यू गोल थियाे । नेपालले बनाएको अग्रतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ठाउँबाट उठेर ताली बजाएका थिए । यो म्याचमा गोल गरेसँगै नेपालले ७ खेल यता गर्न नसकेको गोलको खडेरीमा पूर्णविराम लगाएको हाे।
२. दावा लामा (खेलकुद मन्त्री)
खेलकुद मन्त्री दावा लामा पनि नेपाल र बंगलादेशबीच दशरथ रंगशालामा भइरहेको खेलको फाइनल म्याच हेर्नका लागि पुगेका थिए । लामो समयपछि नेपालमा भएको म्याचमा दर्शक बनेका उनले पनि नेपालले पहिलो हाफमा बनाएको अग्रतामा बसेको स्थानबाट उठेर खुशी प्रकट गरेका थिए । खेलको ४२ औँ मिनेटमा नेपालको लागि विशाल राईले गोल गर्दै नेपालको स्कोर दोब्बर बनाएका हुन ।
३. रमेश सिलवाल राखेप (सदस्य सचिव)
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल पनि नेपाल र बंगलादेशबीच भएको थ्री नेशन्स फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल म्याच हेर्नका लागि रंगशाला पुगेका थिए । उनीसँगै एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, उपाध्यक्ष शिव कोईराला, सार्वजनिक लेखासमिति सभापति भरतकुमार शाह पनि नेपाल र बंगलादेशबीचको म्याच हेर्न दशरथ रंगशाला पुगेका थिए ।
आज भएको म्याचमा नेपालले बंगलादेशलाई २–१ को गोलअन्तरले पराजित गरेको हाे । पहिलो हाफमा नेपालले दुई गोलको अग्रता लिएको थियाे। बंगलादेशले दोस्रो हाफको ८० औं मिनेटमा एक गोल गरेको थियो ।
बलात्कार तथा यौन हिंसाविरुद्ध बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अगाडि युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजक सदस्यबाट किशोरी बलात्कारमा
गत वैशाख ३० गते देशका ७५३ स्थानीय तहमा सम्पन्न निर्वाचनको हालसम्म ६३८ वटामा मगगणना सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका
काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगर पालिकामा स्वतन्त्र तर्फका उम्मेदवारले ‘जादू’ चलाइरहेका छन् । चुनाव चिह्न लोरौ रहेका दुवै स्थानीय तहका
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नपाओस् पनि किन, बलात्कारको घटना छ । त्यसमा पनि सन्
बालेन साहलाई पुत्री लाभ
‘मेरो बुवाले मलाई प्रश्न सोध्न सिकाउनुभयो त्यसले मलाई
पुरुषले यी कुरामा ध्यान दिन आवश्यक
हप्तामा दुई पटक भन्दा बढी यौन सम्पर्क गर्दा
याङ्वरक गाउँपालिका : एमालेको ‘क्लिन स्विप’